Jarmalka wuxuu leeyahay buuro haybad leh, baadiyaha neefta qaadanaya, iyo magaalooyinka cosmopolitan taas oo ka dhigaysa safarka tareenka halkaas khibrad soo jiidasho leh. Waxaa jira meelo badan oo heer sare ah to see including Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, iyo Frankfurt, iyo kuwa kale oo badan. goobaha Kuwani iyo magaalooyinka yaryar ayaa dhamaantood isku xidhan by a hi-speed wanaagsan loo soo abaabulay nidaamka tareenka. Taas ayaa ka dhigaysa safarka tareenka ee Germany si fudud. Halkan waa hage loogu talagalay holidaymakers waayo, safarka tareenka ee Germany si loo hubiyo in aad ugu leeyihiin safarka raaxo suurto gal.
The best use of Train travel in Germany is during the day, oo ay ku jiraan si degdeg ah Intercity Express, do not require seat reservations. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku talajirto in safarka ma jiraan wax dhibaato ah ee tayaasha kuraasta aad ka hor. Xafido kursiga daaqad loogu talagalay muuqaal ah ama aad ku doorato kursiga si loo hubiyo in aad la kulanto raaxada ugu badnaan.
Germany waa meel fiican si ay u safri qoyska. On tareenada tareenka Jarmal, children under the age of six travel for free with no ticket needed. Children over 6 laakiin da'doodu ka yar tahay 15 sidoo kale u safri for free marka la socon qof weyni rakaab-bixinta a.